Ihoseyili yeCPLA yeKofu yeKofu uMvelisi kunye noMboneleli |Ikamva
Isiciko esivuselelekayo seekomityi ze-espresso.Esi siciko silungile kwikofu eshushu okanye itshokolethi, okanye isiselo esishushu ukuya.Yenziwe kwi-CPLA, imathiriyeli ehlaziyekayo eyenziwe kwizityalo.Ibhalwe ngemiyalezo echubekileyo.Yenziwe ngezityalo.Icompostable ngokwentengiso apho yamkelwe.
Izivalo zekomityi zethu ziyilelwe ngokukodwa iindebe zeFUTUR, zibonelela ngokuvuza okungavuziyo okukhuselekileyo okulinganayo ngalo lonke ixesha.Sinikezela ngeziciko ze-CPLA ze-bioplastic ezivundisiweyo.Ifumaneka ngedayamitha ye-80mm kunye ne-90mm ye-CPLA izivalo zekomityi.
Ezi zivalo zekomityi ye-CPLA zenziwe kwi-CPLA, i-bioplastic ehlakaniphile eyenziwe kwizityalo, kungekhona i-oyile kwaye iqinisekisiwe kwi-industrial compostable.Esi sivalo silingana neekomityi zethu.
Yenzelwe kwaye iveliswe ngokukodwa iindebe zethu zeFUTUR ukuqinisekisa ukutywinwa kobungqina bokuvuza ngalo lonke ixesha.
Imigangatho engqongqo yolawulo lomgangatho iqinisekisa ukunyamezelana okubalulekileyo kuyagcinwa kwaye iqinisekisa ukuvuza okungavuziyo okukhuselekileyo okulinganayo ngalo lonke ixesha.
Izivalo zethu zekomityi ye-CPLA zenziwe kwi-CPLA, i-bioplastic enobuchule eyenziwe kwimithombo yokuhlaziywa ngokukhawuleza esekwe kwizityalo.
I-CPLA ine-75% ekhutshwa ngaphantsi kwe-CO2 ekhutshwayo kuneplastiki yesiqhelo kwaye inokudityaniswa ngokurhweba.Ziqinisekisiwe ukuba ziyavundiswa kwimizi-mveliso.Babonelela ngokhetho lokuphambukisa inkunkuma kwindawo yokulahla inkunkuma naphi na apho kukho izibonelelo zorhwebo zomgquba.
Izivalo zethu ezintsha neziphuculweyo ze-CPLA zekomityi ziyilwe ngokwe-ergonomically ukomeleza amava akho ekofu yokuthatha.Uluhlu lwethu lubandakanya iintlobo ngeentlobo zeemilo kunye nobukhulu, kubandakanywa isiciko esitsha se-sipper esimhlophe kunye ne-spout eyongeziweyo, engachithekiyo.
Sinikezela nge-embossing yesiko kunye nemibala kwiziciko zekomityi
FI-HL80PLA 80mm CPLA Coffee Cup Lid-Yendalo Fit 6/8/12S oz Cups 1000(20-50pcs)
I-FI-HL80PLA-B 80mm CPLA Coffee Cup Lid-Black Fit 6/8/12S oz Cups 1000(20-50pcs)
FI-HL90PLA 90mm CPLA Coffee Cup Lid-Natural Fit 8S/10/12/16/20/24 oz Cups 1000(20-50pcs)
I-FI-HL90PLA-B 90mm CPLA Coffee Cup Lid-Black Fit 8S/10/12/16/20/24 oz Cups 1000(20-50pcs)
·Iisayizi ezahlukeneyo ukusuka kwi-80 & 90mm zilingana ne-6 - 24 oz indebe yephepha.
·Iziciko ezivundisiweyo nezinokuphinda zisetyenziswe.
·Uyilo olulungiselelweyo kunye noshicilelo olukhoyo ukuqaqambisa ibhrendi yakho.
Ngaphambili: INdebe yePhepha eliphindwe kabini
Okulandelayo: Bagasse Coffee Cup Lid